Umhla My Pet » umphezulu 10 Iimpazamo Amadoda Yenza Xa Inxibelelana Women umxokozelo
ukubuyekezwa: Mar. 25 2020 | 5 min ukufunda
impazamo #4: Ngokuyithumela emfiliba, umyalezo generic okanye usisiqhwala
Ngoko wathabatha umgudu ukuze abe ekuhayikheni lilungu kwisiza abathandanayo, kwaye ufuna ukwenza eyona sobulungu bakho. Kodwa ke weza umyalezo boilerplate umgangatho, kwaye ngokukhawuleza yakhutshelwa zigxunyekwe oko ngayo amantombazana.
yiya wena! Ubuncinane ukuba nguwe ocinga ukuba.
Abafazi ungathanda ukuba azive ezizodwa ebalulekileyo. Bakwazi ivumba umyalezo ifomu isiqhwala isekude, kwaye Cima iqhosha usoloko isemnyango.
Ngoko ke, kutheni ungakhe indlela eyahlukileyo?
funda Eneneni inkangeleko yakhe yonke (siyazi ukuba buhlungu, kodwa kunjalo!), bafunde yonke unako ngaye, ze emva koko athumele sakhe onengqiqo, umyalezo lobuqu.
khumbula, wena imiyalezo kuyo yaye kufuneka uzive ukuba nguye intombazana kuphela kwihlabathi lonke ukuba unomdla.
Gcina imiyalezo zakho ngobulungisa mfutshane ani. Compliment okanye zikwathetha into ethile okanye izinto umdla kwiprofayili yakhe.
ngelo xesha, ukugqiba umyalezo ngalinye kunye “elingaqondakaliyo amanyathelo”. Yiba nobubele kwaye ngembeko, kodwa ndithi izinto ongathanda ukuba enze elandelayo.
Musa ukuyishiya emangalisiwe. Umzekelo “ndiza kuthetha nawe kungekudala” okanye “imenyu umgca”.
impazamo #5: Ukuthatha ixesha elide kakhulu ukuphendula umyalezo wakhe
Nayo yonke ngxolo ngeenxa ekuhendweni kwaye “kuphuthuma igcisa” zoluntu ezi ntsuku, abafana abaninzi bayoyika kungcungcuthekisa abafazi kude ngokubonakala banomdla kakhulu okanye lithemba.
Ngoko ke ufumana umyalezo wakhe aze alinde. kwaye silindele. uzibuza xa nto “Kulungile” ukuphendula kuye.
Makhe Ukucima oku phezulu.
Ukuphendula ngokukhawuleza ayikho into embi. Kuya kukunceda ukuba ume ngaphandle kwezinye guys elinesibini ukuba umyalezo namhlanje. Kanye amathuba ezininzi ebomini, wena kude bhetele ekuxabeleni ngelixa intsimbi kushushu.
Fumana phezu kwayo nomyalezo umva yakhe. Inyaniso, kuyenza xa yena nangoku nto azilogwanga phezu. ukulibala “imidlalo intloko” kwaye wena. Abasetyhini bathanda abantu bazithembe abo bakholisekile eluswini yabo. Kuba wena uya uzakulunga!
impazamo #6: Ucela inkcazelo yakhe yobuqu ngokukhawuleza kakhulu
Ngoko ke umyalezo le ntombazana ngokwenene esikhulu bajonge, waza waphendula ezisisiseko “Mholo” umyalezo. Ngoku kuthweni?
Ufuna idilesi yakhe yokwenene ye email, inombolo yakhe yefowuni, inombolo umsebenzi wakhe, okanye ngcono noko idilesi yakhe ukuze ungaya khona ngoku, kunene?
Ndicela ukuba nayiphi na inkcazelo yobuqu kwimiyalezo yakho yokuqala yindlela ekhawulezayo ukubulala ubudlelwane phambi kokuba aqalise.
Cinga izinja ezimbini yokusondela omnye. benze ntoni? Baqala ngokucothayo kwaye ngobuchule, uqhubeke ukuze zijoje omnye.
Yini na ukuba benze oku? Kwaye bona ngokwazana ezinye.
Abantu ziyafana ngandlela ezininzi.
Musa woyikise yakhe kude. Thabatha kade yaye makabe naye ukwazi phambi ocela ulwazi.
impazamo #7: Ukwenza nesini kumyalezo wakho kuqala
Ewe, yena Kushushu ngokwenene heeee iprofayile yakhe kubonakala flirty kunye ngokwesondo.
Ngoko ucinga ukuba KULUNGILE ukuba azenzi ngokwesini xa uzama uqhagamshelane naye, FA!
Ngaphandle kokuba uzihlalela AdultFriendFinder.com okanye ezinye site omdala, nesini akungekwazeki ukuba akuncede.
Bobe mhlawumbi idutyulwe naziphi amathuba ukuze ube naye.
Ngoko musani ukwenza nto.
IPHEPHA: 1 2 3